Ego na abụọ - Best Forex EA si | Expert etozu | FX ígwè ọrụ
HomeForex SchoolEgo ụzọ abụọ
Ahịa: $ 347 (1 EGO VALID 12 MỌTARA, EZIN FREELỌ AKA & 24/7 Nkwado nnweta)
Mara: Enwere ngwugwu abụọ dị iche iche nke Jet Trader Pro Expert Advisor dị ugbu a:
Forex na-mgbe na ahịa na abụọ.
Mgbe ọ bụla ị na-ahụ a mgbanwe ego ọnụego, ọ ga-aghọ a ego ụzọ dị otú ahụ dị ka EUR /USD. EUR /USD na-egosi abụọ ego: na Euro na US Dollar.
Ebe a bụ a nseta ihuenyo nke ego ụzọ abụọ egosipụta na ahịa nche window nke Metatrader:
Base Ego Na Quote Ego
The mbụ ego nke a ego ụzọ na-ezo dị ka "isi ego", mgbe nke abụọ onye a na-akpọ "quote ego", na ha na-emekarị iche site na a na-atụ ịsụ na ịgba ọhịa ( "/").
The kasị isi ego bụ:
The isi ego uru bụ mgbe niile 1 ihe atụ, 1 Dollar, 1 Pound, 1 Euro, wdg
Na ngụkọta oge bụ: 1 unit nke Base Ego aka ekedep X nkeji nke Quote Ego.
Ọ bụrụ na ndị isi ego bụ USD, dị ka USD / JPY, a quote nke USD / JPY 88.48 pụtara na otu US dollar bụ hà 88.48 Japanese yen. Ọ bụrụ na ndị isi ego bụ EUR, dị ka EUR / USD, mgbe ahụ, a quote nke 1.3980 pụtara na otu Euro bụ hà 1.3980 US Dollar.
A ozu ahia aka ekedep a ego ụzọ ma ọ bụrụ na o na-ekwere na isi ego ga-ebili ikwu na quote ego, ma ọ bụ akanyam a ego ụzọ ma ọ bụrụ na o na-ekwere na isi ego ga ibelata ikwu na quote ego.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị leba anya na EUR / USD, ebe Euro bụ ego ego ma si otú a bụrụ "ntọala" maka ịzụta / ire. Ọ bụrụ na ikwere na nsogbu ụgwọ mba ụwa nke Eurozone ga - emeri euro, i gha eme EUR /USD. Ị na-ere euro na-atụ anya na ha ga-ada ke uru megide US dollar.
Cheta na: Forex trading na-agụnye imekotaotuugbo azụ nke otu ego na n'ire nke ọzọ n'ime ụzọ. Ya mere, mgbe ị na-azụta a ego ụzọ, ị zụrụ isi ego na-ere na quote ego.
Ikele Ma Jụọ Ahịa
A na-erekwa ego abụọ ahụ ọnụ ego wee kwuo ọnụ ahịa “ọnụ” na “jụọ”.
The "Ikele" bụ price na nke i nwere ike na-ere isi ego / ịzụta quote ego. The "Ịjụ" bụ price na nke i nwere ike ịzụta isi ego / ere quote ego. Ị ga-ahụ na-ajụ price bụ mgbe elu karịa ikele price.
mgbasa bụ ọdịiche dị n'etiti ego ahụ na ịrịọ arịrịọ (Agbasaruo =-ajụ-ikele).
Isi ihe na-aga nke ọma trading idu ke ahọpụta otu ma ọ bụ abụọ ụzọ abụọ nke ego na ị chọrọ ahia ka a mbido. Ka ị na-enweta obi ike, i nwere ike iji tinye ihe abụọ gị trading Pọtụfoliyo. Ma n'ihi na a ọhụrụ ozu ahia ma ọ bụ ọṅụ ọ na-mgbe gwara ahia na a ole na ole nke na abụọ dị nnọọ iji hụ mfe.
isi ụzọ abụọ
The asatọ ọtụtụ ugboro ugboro ahịa ego (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD na AUD) na-akpọ isi ego, na ihe nile ndị ọzọ ego na-ezo dị ka obere n'ihi na ha na-egwu na-erughị nke a ọrụ na ndị na-erughị mmiri mmiri.
The Isi ụzọ abụọ bụ nanị asaa isi ego paired na USD. Ha ihe karịrị 70% niile Forex trades:
United States Euro-dollar otu
USD / JPY 17% United States/
Japan Dollar-yen otu
GBP / USD 14% United Kingdom/
ma ọ bụ USB
USD / CHF 9% United States/
USD / CAD 5% United States/
AUD / USD 4% Australia /
United States Australian-dollar Aussie ma ọ bụ
NZD / USD 4% New Zealand/
Rịba ama na-egosi
Rịba ama na Ego Names na nicknames:
Ego aha na nicknames nwere ike ịdị mgbagwoju anya mgbe ị na-ege ntị Forex ahịa nkọwa ma ọ bụ na-eme Forex ahịa nnyocha, otú ijide n'aka na iche ma ọ bụrụ na onye dere ma ọ bụ nyocha na-ezo aka n'otu n'otu ego ma ọ bụ na ego ụzọ.
Egosi na ịchọputa Iche na aha otutu ojiji:
Ọ bụrụ na onye na nyocha na isi akụ na-ede a akụkọ na-ekwu na Canadian dollar ga-eme n'ọdịnihu, ndị ikwu na-ezo aka n'otu n'otu akwụkwọ ego, na nke a na-CAD, egosi na ndị USD /CAD ga-akpali ala (USD ọgwụgwụ / CAD siri ike). Otú ọ dị, ọ bụrụ na ndị ikwu na-atụ aro na Dollar-Canada ma ọ bụ Loonie ga-eme n'ọdịnihu, ọ na-ezo aka ego ụzọ na ana a amụma na USD /CAD ga-akpali elu (USD ike / CAD na-adịghị ike).
Buru n'uche na aku na uba ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị anụ ego bụ na elu ina karịa ego dabere na obere anụ ebe.
Gịnị mere ndị a The Seven Isi ụzọ abụọ?
Ọ niile nwere na-eme na olu. Ndị a bụ ndị kasị arụsi ọrụ ike na-akpali (ahịa) ego na ụwa. Ha paring bụ ịrịba na trading mpịakọta ngụkọta na puku ijeri dollar kwa ụbọchị. Ndị a bụ n'ozuzu kacha adabara ụzọ abụọ maka trading, karịsịa maka mbido ahịa. E nwere ọtụtụ ihe, na-amalite na ala na-agbasa na dị na a ụzọ abụọ. The ọzọ mmiri mmiri a ego ụzọ bụ, ala mgbasa a bụ.
Gịnị bụ mgbasa? Mgbasa ihu ọma bụ ihe dị iche nke 'ikele' na 'ịjụ' price, ma ọ bụ ndị ọzọ okwu, ọ bụ otú a Brokerages irite ha Ụlọrụ. A na-ahụkarị na-agbasa na a isi ụzọ n'etiti otu pip na atọ pips (ezie na mgbe ụfọdụ elu nke anọ pips). Nke a bụ na ndị ezi uche nke ore isi, ma na-akọ na-anya na liquidity nke ụzọ, dị ka e kwuru.
Gịnị Bụ The Importance Of a Seven Isi ụzọ abụọ?
Ndị a asaa bụ isi na abụọ mgbe niile kwesịrị ịbụ amalite maka novice ozu ahia ịmụta naanị a ọma Forex trading usoro. Ndị a ụzọ abụọ ga-enye ndị kasị ibu ọnụ ọgụgụ nke ohere (ahia setups) maka ahia eru na dị mma maka Forex ụbọchị trading. Kasị Forex trading usoro ga-akwado ka ụmụ akwụkwọ ha na ha na ahia ndị a ụzọ abụọ, na ezi ihe kpatara. E nwere ihe karịrị ezuru ohere ndị a asaa bụ isi ụzọ abụọ iji na-enye onye ozi oge ozu ahia.
Ihe ọzọ dị mkpa ihe na mkpa ka ị na-n'uche bụ na n'elu asaa bụ isi na abụọ na-azaghachi technical analysis nke ọma. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ndị dị elu liquidity ndị a ụzọ abụọ nke na-eme ha ihe ahịa oru oma na price chọpụtara ọzọ ezigbo.
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ ịmụta atọ na anọ nke isi ego ụzọ abụọ, ị nwere ike na-eme ka a otutu ego. Ọtụtụ n'ime ndị edinam ke Forex ahịa bụ nke ndị a bụ isi ụzọ abụọ, dị ka 90% nke ego azụmahịa na-agụnye ha. N'ihi ya, ọ bụ ihe kasị mma na-anọ na majors.
Rịba ama na Ego Specific Fundamentals:
Otu ụzọ amụma abụọ ọ bụla na-aza maka ihe omume dị iche iche ma chọọ usoro na atụmatụ dị iche. Biko jiri akụkụ a akpọrọ Currency Specific Fundamentals ka ịmụtakwu banyere ụdị mkpụrụ ego nke ọ bụla iche.
Minor ụzọ abụọ (A nta Ókè)
Ụfọdụ ndị so dee na ego na abụọ nwere grouped naanị anọ mbụ ego na abụọ dị ka majors (EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF); relegating ikpeazụ atọ na ihe ùgwù nke ịbụ a obere ụzọ (USD / CAD, AUD / USD, NZD / USD) n'ihi na budata obere trading olu.
Ndị ikpeazụ a atọ ego abụọ na-merie ndị dị iche nke ịbụ na-akpọ nnweta ụzọ abụọ n'ihi na ha aku dabeere exporting nnweta dabeere ego.
The Commodity Ego
USD / CAD: Dollar Canada ma ọ bụ Loonie
The ọzọ na abụọ na merie ebe ndị a kpọrọ obere ụzọ abụọ bụ Scandinavian ego (USD / NOK, USD / DKK, USD / SEK).
The Scandinavian Ego
USD / NOK: Norwegian Krone (Norway)
USD / DKK Danish Krone (Denmark)
USD / SEK Swedish Krona (Sweden)
Rịba ama na Scandinavian Ego:
Ego ndị Scandinavian enwewo ike na afọ ole na ole gara aga, karịsịa USD / NOK nke dị na chaatị (ike Dollar / ike Krone) n'ihi na Norway nwere nnukwu akụ na ụba nke na-eme ka mmanụ na-ebupụ mmanụ (nke na-eme ka NOK dị ike ego ahia).
Cross-Ego ụzọ abụọ
A cross-ego ụzọ, ma ọ bụ cross ma ọ bụ obe maka obere, bụ ihe ọ bụla ego ụzọ nke na-adịghị agụnye US Dollar.
Gịnị bụ ihe mere ndị trading na obe?
Reason # 1: diversification
Ihe ka nnọọ ọtụtụ nke ego trading-ewe ebe ke dollar abụọ, otú ahụ obe-aghọ a mma ọzọ ka mgbe niile erekwa na US Dollar.
Reason # 2: Ego Ezubere
The obe nwee ahịa na-ọzọ ozugbo kwụsị trades nke kpọmkwem onye ego na-uru nke ozi ọma ma ọ bụ ihe. Ka ihe atụ, gị research nwere ike na-atụ aro na Euro nwere oké nsogbu n'ihi na Ọkaakaa ụgwọ mbipụta (Greece, Ireland na Portugal) nakwa na ọ na-kara aka na ibu na-adịghị ike. Ị nwere ike anya gburugburu na-uru nke a na ike ibido itule ere EUR / USD, ma na ị na-ekwubi na US Dollar bụ bụghị ọtụtụ mma, ebe ọ bụ na United States nwere ya oke ụgwọ okwu. Your n'ihu research na-egosi na Switzerland nwere a nnọọ ike na aku na uba na-erughị ụgwọ, na ị na-ekpebi na-uru nke a site shorting EUR / CHF.
EUR / AUD 3.8 Eurozone /
EUR / JPY 3.1 Eurozone /
GBP / JPY 4.7 United Kingdom/
CHF / JPY 4.0 Switzerland /
AUD / JPY 3.1 Australia /
NZD / JPY 3.9 New Zealand/
GBP / CHF 5.2 United Kingdom/
GBP / CAD 6.0 United Kingdom/
GBP / AUD 4.4 United Kingdom/
GBP / NZD 9.2 United Kingdom/
Ndị ọzọ na-agafe
AUD / CHF 4.1 Australia /
AUD / CAD 4.4 Australia /
AUD / NZD 5.1 Australia /
* “Mgbasa Ọdịmma” ndị a bụ FXCM, nke enwetara na http://www.fxcm.com/forex-spreads.jsp, ewepụtara site na nkezi ịgbasa agbasa maka oge June 1, 2011 ruo June 30, 2011 Spreadgbasa ahịa ọ bụla dịgasị iche na enweghị ike izi ezi dị ka ịkpa nkata gbasara ịgbasa site na iji ngosipụta mgbasa dị mma (dịka StatMonitor_1.1Phat- ma ọ bụ FXRM Spread History).
Ndọghachi azụ Iji Trading The obe:
Drawback # 1: High Agbasaruo
Ụfọdụ n'ime obe n'elu nwere a elu-agbasa. Ihe atụ, EURNZD nwere a typical mgbasa nke 7.5 pips. Tụlee na elu na-agbasa na ala mgbasa anyị hụrụ na majors. Ụzọ abụọ dị ka nke a nwere a elu mgbasa ruru ya ala liquidity (ole na ole ahịa erekwa ya).
Drawback # 2: Naa ụzụ
N'ihi na obe na-adịghị ahịa dị ka kpamkpam dị ka majors, ha adịghị eme ka technical analysis nakwa. The wezụga a na-achị bụ EUR / JPY na GBP / JPY, ma, ọbụna na ha bụ ihe obodo na-abaghị uru karịa EUR /USD na GBP /USD.
Osisi Ego ụzọ abụọ
Fọrọ nke nta niile nke a na-akpọ osisi ego na-emekarị na-abịa site mba na emepe emepe na-kwuru, nke counter-ego megide USD dị ka nke a: USD / xxx ebe xxx bụ ISO 4217 koodu n'ihi na osisi ego (eg, USD / MXN). A ele mmadụ anya n'ihu ndepụta nke ISO codes na aha ndị kasị nkịtị osisi ego ndị a n'usoro abiidii na categorized site obodo ebe.
Cheta na: Ọbụna ma ọ bụrụ na osisi na akwụkwọ ego na-adịghị na kwuru, nke counter-ego megide USD, ọ ka na-abụkarị ndị e depụtara abụọ mgbe isi ego (eg, EUR / MXN), ezie na e nwere mgbe niile wezụga (eg, CZK / JPY).
Gịnị bụ ihe mere The Trading The Exotics?
Reason # 1: Sexiness
A na-arara ụfọdụ ndị na-azụ ahịa n'ime anụ ahụ n'ihi arịrịọ mmekọahụ nke ndị si mba ọzọ. Might nwere ike were onwe gị dị ka onye “ụwa” ma gha azụ ahịa mba ụwa. Dị ka ndị dị otú ahụ ị nwere ike ịchọ a ore nke ahụ nyere ihe karịrị otu narị ụzọ abụọ ụdị ego na-eche na ị ga-achọ nke ahụ. Nke a bụ ebumnuche kacha sie ike ma ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị na-eme, obi ga-ajọ gị njọ.
Reason # 2: Country Specific Economics
The exotics nwee ahịa na-na-uru nke ọnọdụ akụ na ụba nke a na mba. Ihe atụ, ị nwere ike ugbua ghọtara na kasị G7 mba na-kwajuru na nsogbu akụ na ụba na ụgwọ, na ị chọrọ diversify n'ime ego nke mba ndị kasị fiscally ụda (eg, ogologo na Chile peso site na-ere USD / CLP, na ogologo nke Singapore dollar site na-ere USD / SGD). Ma ọ bụ, ị pụrụ ịbụ onye chọrọ ntakịrị ego nke mba ị maara na-na nsogbu miri emi. Ugbu a, i nwere ike na-ele ndị esemokwu na Arab ụwa, na-achọ ka obere Ijipt Pound (EGP / USD) ma ọ bụ na Libyan Dinar.
Reason # 3: Business
Kasị sịrị erekwa ndị a ego na-eme otú ahụ n'ihi na ha nwere na. Kere nte a Hungarian ewu ike mkpa ịzụta ígwè si Japan (HUF / JPY).
EGP Ijipt Pound
Eastern European Ego:
ALL Albanian Amalek http://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_lek
-ete Russian Federation
Far Ma Near Eastern Ego:
ma ọ bụ Renminbi Ikekwe otu ike ego
abụọ; Otú ọ dị, ọ bụghị ndị ọkachamara nyere ya.
KRW Korean mERIRI http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korean_won
Latin American Ego:
BRL Brazil Real http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_real
CLP Chile peso http://en.wikipedia.org/wiki/Chilean_peso
cou Colombia na-azụ Real http://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_real
MXN Mexico peso http://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_peso
Middle Eastern Ego:
MEGODỊ Turkish Lira http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_lira
Ndọghachi azụ Iji Trading The Exotics:
Ọtụtụ n'ime ndị na osisi na akwụkwọ ego ụzọ abụọ nwere a dị nnọọ elu na-agbasa. Mgbe ị ga-akwụ ụgwọ banyere 2 pips maka a ụzọ ka EUR / USD, ị pụrụ ịchọta onwe gị na-akwụ ụgwọ a mgbasa nke 200 pips na osisi abụọ na ndị na-erughị mmiri mmiri ka USD / MXN, CZK / JPY na AUD / MXN. N'eziokwu, onye ọ bụla pip wee gbakọọ na naanị 1 / 10 nke ihe ọ bụla ọzọ; ma ọbụna na 1 / 10, na pip mgbasa bụ ka elu. Mgbe ị na-ala 200 pips si ina-aga ya na-emekwa ka ịtụkwasị a uru ahia a ezigbo ihe ịma aka.
Drawback # 2: abaghị uru Trading
Mgbe ego na-adịghị ahịa kpamkpam, ha na-akpali erratically. A ala liquidity apụtakarị na, e wezụga na-enwe a ọzọ dị oké ọnụ na-agbasa, na-ego ụzọ dịghị aza technical analysis nke ọma. N'ihi ya, n'ihi na ha elu mgbasa azụmahịa na-eri na kwekọrọ ekwekọ enweghị technical discoverability, ọtụtụ osisi na akwụkwọ ego ụzọ abụọ adịghị uru na ahia.
Ikele na Jụọ Ahịa
Eastern European Ego
Latin American Ego
Minor ụzọ abụọ
Rịba ama Forex